Madaxweyne Geelle: “Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxeyn karta ma jirto” | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Madaxweyne Geelle: “Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxeyn karta ma jirto”
Jabuuti ayaa xilligaas loo xil saaray in ay dadaal u sameyso sidii loo dajin lahaa xiisadda heerka sare joogtay ee labada dal, islamarkiina waxay Jabuuti sameysay guddi xaqiiqo raadin ah oo soo baara tabashooyinka ay Soomaaliya qabtay.
Waxa uu intaas ku daray in labada waddan ay daris yihiin, islamarkaana aysan sina u kala maarmin.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa sharraxay sababtii uu dowladda Soomaaliya ugu jawaabi waayay markii ay ka caroortay sida ay Jabuuti u wajahday khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
“Tan ugu horreysa, Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxeyn karta ma jirto, tan labaadna howshan waxay ku timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo bandhigay shir madaxeedkii IGAD, oo nala yiri ‘idinkaa ugu dhowe bal soo eega’, waan iska diidi karnay oo waan odhan karnay cid kale u dirsada, laakiin kalgacal baan u oggolaanay,” ayuu yiri.
Previous articleArdayda Soomaalida ee Sudan oo baaq cabasho ah u diray dowlada Somalia
Next articleFarmaajo oo lagu eedeeyey inuu hurinayo dagaal iyo Kenya oo ka walaacsan..